ကိုရီးယားဇာတ်ကားတွေထဲက တချို့​သော ဇာတ်​ကောင်​တွေဟာ လက်​တွေ့ဘဝက နာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်​အချို့ကို မှီငြမ်းပြီး ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် “Fight For My Way” ဇာတ်လမ်းတွဲထဲက Go Dong Man (Park Seo Joon) နဲ့ Choi Ae Ra (Kim Ji Won) ဇာတ်​ကောင်​တွေဆိုရင် လက်​ဝှေ့ကစားသမား Choo Sung Hoon နဲ့ သူ့ရဲ့ဇနီး Yano Shiho တို့ကို မှီငြမ်းထားတာပါ။
နောက်ပြီး “The Hymn of Death” ဇာတ်ကားဆိုရင်လည်း နာမည်ကြီး ဆိုပရာနိုအဆိုရှင် Yun Sim Deok (Shin Hye Sun) နဲ့ ပြဇာတ်​ရေးဆရာ Kim Woo Jin (Lee Jong Suk) တို့ရဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းကို ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်​ကြောင်း ပရိသတ်ကြီးသိပြီးဖြစ်မှာပါ။ ယခုတစ်ခါမှာ​တော့ ဒီဇာတ်​ကောင်​တွေအပြင် လက်​တွေ့ဘဝက လူပုဂ္ဂိုလ်​တွေကို မှီငြမ်းထားတဲ့ ဇာတ်​ကောင် (၄) ခုကို ​ဖော်ပြ​ပေးချင်ပါတယ်။
1. Choi Taek – “Reply 1988”
“Reply 1988” ဇာတ်လမ်းထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ ဉာဏ်ကြီးရှင် Go (Ba Duk) ကစားသမား Choi Taek (Park Bo Gum) ဇာတ်​ကောင်ဟာ Go (Ba Duk) ကစားနည်းမှာ အဆင့် ၉ အထိရရှိထားပြီး ကမ္ဘာ့အ​တော်ဆုံး Go (Ba Duk) ကစားသမားတစ်ဦးလို့ အသိအမှတ်ပြုခံထားရတဲ့ Lee Chang Ho ကို မှီငြမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။
​အ​နေ​အေးပြီး စကားနည်းတဲ့ အကျင့်၊ အတွင်းစိတ်ကို မ​ဖော်ပြတတ်တဲ့ စရိုက်နဲ့ ဖခင်က နာရီဆိုင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တာ​တွေက လက်​တွေ့ဘဝက Lee Chang Ho နဲ့ Drama ဇာတ်​ကောင် Choi Taek တို့ကြားက တူညီတဲ့အချက်​တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ မတူညီတဲ့ တစ်ခုတည်း​သော အချက်က​တော့ Park Bo Gum က Choi Taek အဖြစ် သရုပ်​ဆောင်ခဲ့တာ​ကြောင့် အပြင်က လူအစစ်ထက် ပို​ချောတယ်ဆိုတာပါပဲ။
2. Kim Bok Joo – “Weightlifting Fairy Kim Bok Joo”
မင်းသမီး Lee Sung Kyung သရုပ်​ဆောင်ခဲ့တဲ့ “Weightlifting Fairy Kim Bok Joo” ဇာတ်လမ်းတွဲထဲက Kim Bok Joo ဇာတ်​ကောင်က​တော့ ကိုရီးယားလူမျိုး အိုလံပစ် ကစားသမား Jang Mi Ran ကို မှီငြမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ​နွေရာသီအိုလံပစ်မှာ Jang Mi Ran ဟာ ၇၅ ကီလိုတန်းမှာ ​ရွှေတံဆိပ်ဆုကို ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် သူမဟာ ၁၄၀ ကီလိုအထိ အ​လေးမနိုင်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့စံချိန်ကိုတာင် ချိုးဖျက်နိုင်ခဲ့ပါ​တယ်။ ဒါ​ကြောင့် Lee Sung Kyung ဟာ ဒီဇာတ်​ကောင်ကို ပီပြင်​စေဖို့ ကိုယ်အ​လေးချိန်တက်​အောင် လုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါ​ပေမဲ့လည်း လက်​တွေ့ဘဝက Jang Mi Ran နဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင် Lee Sung Kyung က ပိန်သွယ်တဲ့ ခန္ဓါကိုယ်ရှိပြီး အားကစားသမားနဲ့​တော့ သိပ်ပြီး မတူလှပါဘူး။
3. Deokhye – “The Last Princess”
“Last Princess” ဇာတ်ကားထဲမှာဆိုရင် Son Ye Jin ဟာ ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ ​နောက်ဆုံး​တော်ဝင်မင်းသမီး Deokhye အဖြစ် သရုပ်​ဆောင်ခဲ့ပါတယ်​။ ဒီဇာတ်ကားဟာ လူသိနည်းလှတဲ့ ထို​တော်ဝင်မင်းသမီး​လေးရဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်ဘဝအ​ကြောင်းကို ရိုက်ကူးပုံ​ဖော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ့် မင်းသမီးအစစ်ဖြစ်တဲ့ Deokhye နဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင်​တော့ Son Ye Jin ရဲ့ ရုပ်ရည်ဟာ ပိုပြီး ထင်​ပေါ်နေပါတယ်။ ခက်ခဲပင်ပန်းတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်း​တွေမှာ​တောင် သူမဟာ လှပ​နေဆဲပါပဲ။
4. Lee Hyung – “Because I Love You”
“Because I Love You” ဇာတ်ကားထဲက Lee Hyung (Cha Tae Hyun) ဇာတ်​ကောင်က​တော့ဆိုးရွားတဲ့ မ​တော်တဆမှု တစ်ခု​ကြောင့် အသက် ၂၅ နှစ်မှာပဲ ဆုံးပါးခဲ့ရတဲ့ ထူးချွန်တဲ့ ဂီတပညာရှင် Yoo Jae Ha ကို မှီငြမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းထဲက မင်းသား Cha Tae Hyun ရဲ့ ပုံစံဟာ လက်​တွေ့ဘဝက Yoo Jae Ha ရဲ့ အသွင်အပြင်နဲ့ အ​တော်​လေးနီးစပ်တယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ ဒါ​ပေမဲ့ “Because I Love You” ရဲ့ ဇာတ်ညွှန်းဟာ Yoo Jae Ha ရဲ့ တကယ့်ဘဝဇာတ်​ကြောင်းထက်စာရင် ​ပေါ့​ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ဟာသဆန်တာ​လေး​တွေ ပိုထည့်ထားတာကို ​တွေ့ရပါတယ်။
Next 'Return of Superman' ၈နှစ်ပြည့်အတွက် အမှတ်တရစကားလေးတွေ ပြောခဲ့ကြတဲ့ ဂျူမုံရဲ့ Song သုံးမွှာပူး »
Previous « အနာဂတ်ကို စဉ်းစားရင်း တွေးကြောက်မိတာကြောင့် ရေချိုးခန်းထဲမှာ ငိုခဲ့ဖူးတဲ့ Suga